Tsvaga izvo zvekuona muguta reWales reCardiff | Bezzia
Chii chekuona muguta reWales reCardiff
Susana Garcia | 31/03/2021 10:00 | Lifestyle, famba
La Welsh guta reCardiff rine nhoroondo yenzvimbo asiwo kubva kunzvimbo yemazuva ano. Iri ndiro guta guru reWales uye guta diki, rinogona kushanyirwa netsoka uye munguva pfupi, richiita kumira kukuru kwemazuva mashoma. Nhare yekutanga munzvimbo ino yakabva kunguva dzevaRoma uye nanhasi ichiri kuchengetedza nhare yayo inoshamisa, inova chimwe chezvikamu zvacho zvakakosha uye zvakakosha.
Uyu guta rine nzvimbo yechiteshi, izvo zvakaita kuti ive nzvimbo inoshingaira. Uye zvakare, panguva yeRevolution yeIndasitiri yakakura zvakanyanya, sezvo yakava nzvimbo huru yekubatira marasha eBritish, yakakosha pfungwa. Nhasi iro iguta rakazvipira zvakanyanya kutashanyo rinotipa nzvimbo zhinji kuti tione.
1 Cardiff imba
2 Cardiff guta horo
5 Iyo Royal Arcade
6 Cardiff Victorian Central Musika
Iyi ndiyo yakakosha poindi yekuona muCardiff guta. Iyo nhare ine kwaNorman mavambo, kunyangwe yakagadziridzwa nekufamba kwenguva. Mazhinji ekugadziridza ari kukonzerwa neaya akaitwa muzana ramakore reXNUMXth saka iwe unogona kuona imwe yakasarudzika maitiro. Nhare yacho inogara pachikomo chidiki uye inopa kushanya kunonakidza, iine maodhiodhi eodhiyo anowanikwa. Izvo zvinokwanisika kuona fresco kupenda, zvivakwa zvematanda uye dzakasiyana makamuri izvo zvinotishamisa isu nemisanganiswa yavo. Uye zvakare, iwe unogona kukwira iyo Clock Tower kuti unakirwe nemaonero.
Cardiff guta horo
Imba yeguta iri chivakwa hombe chinokwezva kutarisisa, muzana ramakore rechimakumi maviri rekutanga. Izvo zvinokwanisika kushanyira makamuri akavhurika mukati, saka inogona kuve inonakidza kushanya. Iwe unogona kuona iyo inonzi Marble Kamuri ine zvivezwa zvevanhu vakakosha munhoroondo yeWales. Zvinogoneka kuti isu tinogona zvakare kuona iyo Kanzuru Kamuri kana horo, makamuri akashongedzwa nekungwarira kukuru.
Ichi chivakwa chiri padyo neCardiff City Hall, saka chinogona kushanyirwa pasina nguva. Icho chivakwa che neoclassical chirimwa chinogadzira nyika mamuseum. Iyo miziyamu matinowana akasiyana siyana ehezheni, saka zvinowanzo kwana kuenda nemhuri uye nekunakidzwa uye nenguva yekudzidzisa. Tinogona kuwana kubva pakuratidzwa kwesainzi sainzi kana zoology kune akakosha mabasa nevanyori vakaita saVan Gogh kana Rodin. Kune zvakare nzvimbo yevana, kuitira kuti vagone kunakidzwa nesainzi mune inoshanda uye inonakidza nzira.
In the moyo weCardiff tinowana inoshamisa Bute Park, paki yedhorobha yerunako rukuru padyo nenhare yakatambanudzwa ichitevedza Rwizi Taff. Nzvimbo yakakwana yekuzorora uye kuita nzira dzakasiyana dzinomhanya nepakati, netsoka kana nebhasikoro. Pakati payo pane nzvimbo yekudzidzira kudzidza zvakawanda pamusoro pemiti nemhuka mupaki.
Iyo Royal Arcade
Iri guta raive nzvimbo yeVictorian uko kwaive nekutengesa kwakawanda nekuda kwekuwedzera kweiyo Industrial Revolution. Nhasi tinogona kuwana dzimba dzeVictorian dzichiri kushanda nenzvimbo dzekutengesa kuchitoro, izvozvi zvakanangana nekushanya. Asi Royal Arcade ndiyo yekare gallery yeavo vari muguta uye uya ane chimiro chepamusoro. Iyo ndeimwe yenzvimbo dzinozivikanwa kwazvo uye inzvimbo yakanaka yekutsvaga zvinhu zvekushongedza kana dzakanaka zviyeuchidzo zveWales, saka inogona kuve imwe yemaperero ekushanya kunotenga.
Cardiff Victorian Central Musika
Kana iwe uchida dzidza zvakawanda nezve wales gastronomy uye kubva kuguta unogona kuenda kumusika wepakati. Imba yeVictorian-dhiraini ine girazi padenga yakanaka kwazvo uye mairi tinogona kuwana zvese kubva pamasekondi-mabhuku kune ese marudzi ezvokudya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Chii chekuona muguta reWales reCardiff
Nyore runako Hacks ayo achaponesa zuva rako
Maitiro ekuchengeta hutano hweganda rako